ज्योति र रितिकाको मितिनी सार्वजनिक, गाली खाने ज्योतिलाई सबैले गरे तारिफ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । चर्चित गायिका ज्योती मगर र रितिका कुँवरको तीज गीत ‘मितिनी’ एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा मितिनीको सार्वजनिक गरिएको हो । ज्योति र रितिका स्कुले जीवनदेखि नै मितिनी हुन् । गायिका ज्योति मगरले पनि मैले केही गीतमा आफ्नो फरक प्रस्तुति दिएको छु । कहिँ कथाले माग्यो, कहिँ समयले माग्यो, कहिँ निर्देशकले मागे होला तर मैले सुरुवातदेखि नै मौलिक गीतहरु गाउँदै आएको छु । मैले गाएको मौलिक गीतको चर्चा नगर्ने थोरै अभिनयमा देखिएको ग्ल्यामरलाई मात्र चर्चा गरेर गाली गर्ने ? अब यस्तो नगर्नुस् मेरा मौलिक गीत हेरिदिनुस् भनिन् ।
गायिका ज्योति मगरको गुनासो सुनिसकेपछि सधैं आरोप र प्रत्यारोप खेप्ने गरेकी गायिका ज्योति मगरलाई ‘मितिनी’ गीतको भिडियो हेरिसकेपछि भने सबैले तारिफ गरे ।